Matihanina amin'ny fanodinana lalina fitaratra miaraka amin'ny serivisy namboarina ho an'ny fepetra manokana momba ny habeny, ny sisiny, ny fandavahana, ny fanontana, ny fanontana ary ny fitsaboana amin'ny tany.
Injeniera manan-talenta maherin'ny 10 manana traikefa mihoatra ny 5 taona mba hiantohana ny vokatrao izay omen'i Saida Glass amin'ny lever avo kokoa sy ny fahombiazan'ny tsena.
Fenoy ny tsipika fanodinana fitaratra tokana miaraka amin'ny mpiasa mahay, SOP voadio ary fanaraha-maso kalitao an-tserasera. Tsy misy MOQ sy 100% fisafoana ny entana tsirairay.
Fantatrao ve ny atao hoe ranomainty seramika avo lenta amin'ny fanontana nomerika?
Ny fitaratra dia akora fototra tsy mitroka amin'ny endrika malama. Rehefa mampiasa ranomainty fanaova hafanana ambany mandritra ny fanontam-pirinty silkscreen, dia mety hisy olana tsy azo ihodivirana toy ny adhesion ambany, ny fanoherana ny toetr'andro na ny ranomainty manomboka mihintsana, ny fiovan'ny loko ary ny tranga hafa. Ny ranomainty seramika izay ...
Glass Fa Lighting Cover , Dingana Glass Fa Jiro, Home Appliance malemy fanahy Glass, Cover Glass , Ceramic Print Cover Glass , Smart Watch Cover Glass ,